ဟဒီးဆ်: ကျေးကျွန်တစ်ဦး နာမကျန်းဖြစ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ခရီးထွက်သည့်အခါတွင် ၎င်းသူ မိမိ၏ဒေသ၌ ကျန်းမာသန်စွမ်းစဉ် ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးကုသိုလ်ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ကျေးကျွန်တစ်ဦး နာမကျန်းဖြစ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ခရီးထွက်သည့်အခါတွင် ၎င်းသူ မိမိ၏ဒေသ၌ ကျန်းမာသန်စွမ်းစဉ် ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးကုသိုလ်ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်။
အမျိုးအစား: ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။ . အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ထွတ်မြတ်မှုနှင့် အလှတရားများ။ .
အဗူမူစာအရှ်အရီ(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်မူသည်။ကျေးကျွန်တစ်ဦး နာမကျန်းဖြစ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ခရီးထွက်သည့်အခါတွင် ၎င်းသူ မိမိ၏ဒေသ၌ ကျန်းမာသန်စွမ်းစဉ် ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးကုသိုလ်ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်။
အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးအားလပ်နေစဉ် အမလ်ကောင်းမှုများ ကျင့်ဆောင်လေ့ရှိခဲ့လျှင် သူနာမကျန်းဖြစ်ပြီး ထိုကောင်းမှုများကို မပြုလုပ်နိုင်သည့်အခါတွင် ကျန်းမာသန်စွမ်းချိန်တွင် အမလ်ကောင်းမှုများ ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးကုသိုလ် အပြည့်အဝ ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ ခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဥပမာ - ဓမ္မတာ သွေးဆင်းခြင်း စသည့်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ရန် အတားအဆီးများ ရှိလာသည့်အခါတွင်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ ကျေးကျွန်များအပေါ်တွင်ထားရှိသော ကရုဏာတော်နှင့် သနားကြင်နာမှုသည် ကြီးကျယ်လှသည်။
အကြင်သူသည် မိမိကျင့်ဆောင်လေ့ရှိသော အမလ်ကောင်းမှုများအား ခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း စသည့်သာသနာတော်က ခွင့်ပြုထားသည့် ခြွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပြုလုပ်ရန် မတတ်စွမ်းနိုင်ခဲ့လျှင် ယင်းကောင်းမှုအားစွမ်းဆောင်နိုင်ချိန်တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု ခိုင်မာသည့် ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပါက ၎င်းသည် မိမိ၏ဒေသ၌ရှိနေစဥ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းစဉ် ကျင့်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးကုသိုလ်ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်။
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။ . အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ထွတ်မြတ်မှုနှင့် အလှတရားများ။ .